Ipolisi Yemeko Ongenakuyinceda ne-coronavirus (COVID-19) - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Ihlaziywe ngo1 Oktobha 2020
Ukubhukishwa kweendawo zokuhlala Nokwezinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb okwenziwe ngaphambi okanye nge-14 kaMatshi 2020, nokunosuku lokungena olukwiintsuku eziyi-45 ukususela namhlanje, kuqukiwe kwipolisi ibe kungarhoxiswa ngaphambi kokungena. Iindwendwe ezifuna ukurhoxa ziza kuba neendlela zokurhoxa nokubuyiselwa imali ezinokukhetha kuzo, kwaye ababuki zindwendwe bangarhoxisa ngaphandle kokubhataliswa okanye kokuchaphazela ukuba yiSuperhost kwabo. UAirbnb uza kubuyisa imali, okanye akhuphe imali enokusetyenziselwa ukuhamba, equka yonke imali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb yokubhukisha okurhoxisiweyo okukufanelekelayo ukubuyiselwa imali. Ukuze urhoxe phantsi kwale polisi, kulindeleke ukuba uveze ubungqina bemeko ekwenza urhoxe okanye uxwebhu oluxhasa into yokuba le ibiyimeko ongenakuyinceda.
Ipolisi yokurhoxa yombuki zindwendwe iza kusebenza njengesiqhelo xa kubhukishwe emva kwe-14 kaMatshi 2020.
Ukurhoxa kuza kwenziwa ngokweemeko ongenakuzinceda eziqukiweyo ngexesha lokufakwa kwesicelo ibe ukubhukisha okusele kurhoxisiwe akuzukuphinda kuhlolwe.
Kusebenza iipolisi ezahlukileyo xa kubhukishwe ekuhlaleni kwimimandla yaseTshayina kunye naxa kubhukishwe izindlu zeLuxe okanye zeLuxury Retreats.
Kukubhukisha okwenziwe nge-14 kaMatshi 2020 okanye ngaphambi koko
Ukubhukishwa kweendawo zokuhlala nokubhukishwa Kwezinto Ezinokonwatyelwa zika-Airbnb okwenziwe ngaphambi okanye nge-14 kaMatshi 2020, nokunosuku lokungena olukwiintsuku eziyi-45 ukususela namhlanje, kusenokurhoxiswa ngaphambi kokungena. Oku kuthetha ukuba iindwendwe ezirhoxayo phantsi kwale polisi ziza kubuyiselwa yonke imali yazo okanye ibe yimali enokusetyenziswa kuhambo elingana nemali eziyibhateleyo (apho imali enokusetyenziswa kuhambo ifumanekayo khona), ababuki zindwendwe baza kukwazi ukurhoxa phantsi kwale polisi ngaphandle kokubhataliswa okanye kungakhange kuchaphazeleke ukuba yiSuperhost kwabo, ibe uAirbnb uza kuyibuyisela yonke imali yabo okanye ibe yimali enokusetyenziswa kuhambo, equka imali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb.
Ukubhukishwa kweendawo zokuhlala okanye Kwezinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb okwenziwe nge-14 kaMatshi 2020 okanye ngaphambi koko nokunosuku lokungena olukwiintsuku ezingaphezulu kweziyi-45 ukususela namhlanje, okwangoku akuqukwanga kwipolisi yethu yemeko ongenakuyinceda yeCOVID-19. Ipolisi yokurhoxa yombuki zindwendwe iza kusebenza njengesiqhelo.
Ukubhukishwa kwendawo yokuhlala okanye Kwezinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb okwenziwe emva kwe-14 kaMatshi 2020 akuzokuqukwa kwipolisi yethu yeemeko ongenakuzinceda, ngaphandle kokuba undwendwe okanye umbuki zindwendwe wosulelwe yiCOVID-19. Iimeko ezinento yokwenza neCOVID-19 ezingekhoyo kule polisi ziquka: ukuphazamiseka nokurhoxiswa kwezothutho; amacebiso nemiqathango yohambo; amacebiso ezempilo kunye nokuhlaliswa wedwa; ukutshintshwa komthetho osebenzayo; nokunye okugunyazisiweyo ngurhulumente—njengemiyalelo yokufuduka, ukuvalwa kwemida, ukungavumeleki kokuqesha indawo ixesha elifutshane, kunye nemfuneko yokuhlala endlini. Ipolisi yokurhoxa yombuki zindwendwe iza kusebenza njengesiqhelo.
Ipolisi yethu yemeko ongenakuyinceda yenzelwe ukukhusela iindwendwe kunye nababuki zindwendwe kwiimeko ezingalindelekanga ezivela emva kokubhukisha. Emva kokuba kuthwe iCOVID-19 ngubhubhane wehlabathi nguMbutho Wezempilo Wehlabathi, ipolisi yemeko ongenakuyinceda ayizukusebenza ngenxa yokuba iCOVID-19 kunye nomonakalo ewenzayo ayisezozinto zingalindelekanga. Nceda ungalibali ukuyihlolisisa kakuhle ipolisi yokurhoxa yombuki zindwendwe xa ubhukisha uze ucinge ngokukhetha ukubhukisha onokukwazi ukukutshintsha.
Siza kuqhubeka sikuhlola ukusebenza kwale polisi. Nceda uhlale ulijonga eli phepha ukuze ufumane inkcazelo entsha nehlaziyiweyo.
Ipolisi Yemeko Ongenakuyinceda iyasebenza kukubhukisha kwam ngexesha lobhubhane weCOVID-19?
Funda ngepolisi yeemeko ongenakuzinceda ngeli xesha likabhubhane weCOVID-19.
Ukuze ufumane izinto onokukhetha kuzo, yiya kwindawo yokurhoxisa ukubhukisha kwakho uze ukhethe indawo ethi ukulungiselela kwakho ukuhamba k…